SomaliTalk.com » Ra’iisul wasaaraha ay Soomaaliya maanta u baahan tahay oo Samatabixin kara Dadka iyo Dalka
Dr. Baadiyow Badbaadinta Qaranka – (Rescuing A Nation). -Samatabixinta Dadkayga iyo Dalkayga. Ra’iisul wasaare uu dalku maanta u baahan yahay. Dr. Baadiyow wuxuu noqon lahaa Ra’iisul wasaare ay shacabka Soomaaliyed jecel yihiin balse aysan jecleyn shisheeyaha sida Madaxweyne Farmaajo oo kale. Hadii ay noqoto xaga wada shaqeeynta labada ninba mudo dheer ayaan aqaanay waa ay wada shaqeyn karaan. Anigu danteyada Baadiyow xil ha helo ma aha ee waa yaa mudan xilka waqtiga hada la joogo lana shaqeyn kara Madaxweyne Farmaajo oo ay isku Mabda’ iyo ujeedo yihiin. Waxaan gudanayaa xilka isaaran Muwaadin ahaan.
Leadership you can Rely On – Somalia 2012.
Sida la ogsoonyahay dalkeenna muddo soddon sano kabadan ayuu burbur iyo dhibaato ku jiray. Haddaba innagoo ku tiirsan Allaha awoodda leh, kaashanayna dadkeen…
Faafin: SomaliTalk.com // Halkudheg: baadiyoow